Ny lanonana mamaky vaky ny Sinocare iPOCT Industrial Park Project-News-Sinocare
Ny lanonana mamaky ny tetikasa Sinocare iPOCT Industrial Park
Fotoana: 2021-02-22 Hits: 179
Tamin'ny volana Janoary 2021, notontosaina tao amin'ny toerana nisy ny tetikasa ny lanonana famakiana tany ho an'ny fananganana antontan-taratasin'ny tetikasa Sinocare iPOCT Industrial Park. Ny tetikasa dia zaridaina indostrialy iPOCT namboarin'i Sinocare miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 1 lavitrisa RMB. Kasaina hizara telo modules, izany hoe iCARE base base, AGEscan Production base ary CGM base base. Aorian'ny fahavitan'ny tetikasa dia ho tsapany ny famokarana lehibe iCARE sy iCGMS, ireo vokatra vaovao novolavolain'i Sinocare manerantany, ary hanome vahaolana feno kokoa amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ireo aretina mitaiza.
Nanomboka ny taona 2016, ny Sinocare dia nandefa lamina fandraharahana manerantany, nandray anjara tamin'ny fahazoana ny Trividia Health Inc sy PTS any Etazonia, ary nanitatra tamim-pahavitrihana ny asa fitiliana POCT toy ny lipidan'ny ra sy hemoglobinin'ny glycosylated. Ary tamin'ny alàlan'ny fanavaozana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ao an-trano sy any ivelany, ary ny fampidirana ireo tamba-jotra ara-barotra manerantany, dia niditra tao amin'ny tobin'ny orinasa mpamokatra glucose eto an-tany izy.
Ny tetik'asa Sinocare iPOCT Industrial Park vao natomboka dia haorina amin'ny dingana telo, ary tombanana ho 3 taona ny fananganana. Taorian'ny fahavitana dia tombanana fa ny sandan'ny vokatra isan-taona dia hahatratra 200 miliara, ny hetra amin'ny hetra dia hitombo mihoatra ny 2,000 tapitrisa, ary asa efa ho XNUMX XNUMX no hatsangana. Raha manampy amin'ny fanatsarana ny tanjaky ny Sinocare izy io, dia mampiditra hery amin'ny fitomboan'ny rojom-panafody sy ny sehatry ny indostria ara-pahasalamana ao amin'ny faritr'i Changsha High-tech.
Pejy mialoha: Laboratoara fanamarinana iPOCT
Pejy manaraka: Fampiasana an-tsitrapo ho an'ny fanandramana Virus IgM-IgG ANTIBODY TEST